Kuyinselelo esizweni ukudlula kokaMadikizela - Bayede News
Home » Kuyinselelo esizweni ukudlula kokaMadikizela
UNYAKA we-1918 nowezi-2018 yiminyaka eyokhunjulwa njalo emlandweni weNingizimu Afrika ngokwenzeka ngayo okuyohlala kuyisikhumbuzo nasesizukulwaneni esizayo.
Ngowe-1918 kwazalwa uMengameli wokuqala oMnyama kuleli uMnu uNelson Rolihlahla Mandela, kanti owayengumkakhe uNkk uWinnie Madikizela Mandela udlule emhlabeni ngowezi-2018.
Yize beficwe ukufa ngokwehlukana sebaligqashula ifindo lomshado kepha kubantu bakuleli nomhlaba wonke bekungelula ukubahlukanisa ngenxa yeqhaza abalibamba emzabalazweni wenkululeko yezwe. Kusuka kuzwakale izindaba zokwedlula emhlabeni kukaMadikizela, isililo siqhamuka nxa zonke ngoba bese kunguye othathwa njengoMama Wesizwe kwazise ababengaphambi kwakhe oMama u-Albertina Sisulu, u-Adelaide Tambo, u-Emma Mashinini, uPhyllis Naidoo, u-Ellen Khuzwayo, uFatima Meer, uLillian Ngoyi, uDorothy Nyembe sebalala kobandayo. Isigodi saseMbongweni eMbizana sabusiseka ngokukhiqiza uMadikizela owazihlanganisa nomzabalazo eseyintokazi ngenxa yokusondelana noMnu uMandela. Akekho ongalingabaza iqhaza lakhe kwezomzabalazo, ekubeni umama ezinganeni zakhe, ekulweleni amalungelo abesifazane nabantu bonke baseNingizimu Afrika ngobubanzi.
Eminyakeni ayiphilile emhlabeni, ube nesikhathi esincane senkululeko ngoba uhlushwe kakhulu uHulumeni wamaBhunu nezingane zakhe ngesikhathi umyeni wakhe esejele. Amanye amazwi akhe akufikisela ngosizi avuse nohlevane awasho isimo sisibi emuva kokugasela kwezikaDalawane emzini wakhe kusempondozankomo wathi, ““Mhlawumbe ukuba ubunikwe ithutshana lokubamba umoya ulinde esinye isibhakela, ubuzowehlisa umoya njengoba kwenzeke kimina. Uma kwenzeka imihla namalanga empilweni yakho, uma ubuhlungu sebuyingxenye yempilo, angisenakho ukuzwela nokwesaba. Ayisekho nencane into engingayesaba. Ayikho into uHulumeni angayenzile kimi. Abukho ubuhlungu engingabazi.” Kukhona konke ukuhlukumezeka kwakhe akukho nelilodwa ilanga lapho adela khona abantu baseNingizimu Afrika, izingane zakhe ngisho nenhlangano i-ANC imbala. Wayemile ekutheni uyolimela iqiniso kuze kube sekugcineni.
Kulokhu kuguqe idelamzimba ebeliziqu zintathu
Siyavumelana ngokugcwele nabanye abaholi abafana noMnu uJulius Malema ukuthi uMama ukaMadikizela wayengalihola ngempumelelo izwe ukuba wayenikwe ithuba inhlangano yakhe esikhathini esedlule. Ukudlula kwakhe emhlabeni ngalesi sikhathi iqembu elibusayo linhlakanhlaka ngenxa yombango wezikhundla namandla, kumele kube yinselelo enkulu kulo. I-ANC kumele imhloniphe ngokuthi ibuyele enkambisweni yayo yokubumba isizwe nokuqhakambisa amalungelo abantu abaMnyama abebecindezelwe phambilini. Ayathokozisa amazwi kaNobhala Jikelele weSouth African Communist Party (SACP), uDkt uBlade Nzimande othe bazokwenza konke okusemandleni ukukhuluma ngazwi linye noma kukhona ukwehlukana ngoba uMama uMadikizela iyona into abekholelwa kuyo.
Bayede News Apr 6, 2018